भारतबाट फर्केका नेपाली फेरि भारततिरै लागे, भन्छन्य : हाँ के खाने ? मरे उतै मरौंला…हेर्नुहोस । – Nepal Online Khabar
भारतबाट फर्केका नेपाली फेरि भारततिरै लागे, भन्छन्य : हाँ के खाने ? मरे उतै मरौंला…हेर्नुहोस ।
September 3, 2020 45
धनगढी : दिनेश विक सुर्खेतमा बसेर एक कम्पनीमा काम गर्दै लोक सेवा आयोगको तयारी कक्षा लिइरहेका थिए । लक-डाउनका कारण जागिरले निरन्तरता पाएन, आयोगको परीक्षा पनि रोकियो ।
त्यसपछि उनी रुकुमपश्चिम घर फर्के । ‘चैतदेखि घरको मानो खाएर बिनाकाम बस्नुप¥र्‍यो,’ २४ वर्षीय दिनेशले भने, ‘गाउँमा साथीहरू स्याउ टिप्न सिमला जाने भए । म पनि उनीहरूसँगै मिसिएँ ।’
स्याउ टिप्न भारत हिमाचलको सिमला पहाड हिँडेको दिनेशको समूहमा २३ जना छन् । लगभग उस्तै उमेरका उनीहरूमध्ये कोही सुर्खेत र नेपालगन्जमा काम र अध्ययन गरिरहेका थिए । कोहीले भने यसअघि पनि सिमलामा गएर काम गरेका थिए ।
पाइरहेको काम पनि कोरो’नाका कारण गुमा’उनुपरेपछि स्याउ टिप्न सिमला जाँदै गरेका हौं,’ त्यही हूलमा रहेका २३ वर्षीय दीपक विकले भने । रुकुमबाट बस रिजर्भ गरेर धनगढी आइपुगेका उनीहरूलाई नाकाबाट सिमलासम्म लैजान भारतीय ‘एजेन्ट’ आएको दीपकले सुनाए ।
स्याउ टिप्न सिमला जानका लागि बर्दिया बढैयातालका १७ जनाको अर्को समूह पनि गौरीफन्टा नाकामा लामबद्ध भेटियो । उनीहरूमध्येका ग’म्भीरसिंह महतराले गाउँघरमा खाली बस्नुपरेकाले तीन महिनाका लागि सिमला जान लागेको बताए ।
त्यस समूहमा जया र वीरबहादुर भण्डारी दम्पती पनि छन् । पाँच वर्षीर्य बालक बोकेर २२ वर्षीया पूजा परियार पनि टोलीमा सामेल भएकी छन् । ‘श्रीमान् पहिल्यैदेखि सिमलामै हुनुहुन्छ, त्यही भएर म पनि हिँडेकी हुँ,’ पूजाले भनिन् ।
उक्त समूहमा रहेका गोपाल घर्तीका अनुसार नेपाली कामदारका लागि सिमलाबाट स्याउ बगानका साहुहरूले गाडीको पास बनाएर सीमा नाकासम्म पठाउने गरेका छन् । ‘को’रोनाको ड’र मान्दै घरमा हात’खुट्टा बाँधेर बस्न सकिएन,’ २७ वर्षीय घर्तीले भने । याे खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
Prevयुरोपमा अब लकडाउन आवश्यक छैन : (WHO)
Nextनेपाल-भारत सीमामा ग’स्तीमा रहेको सशस्त्र प्रह’रीमाथि आ’क्रमण…हेर्नुहोस् ।